မိဘနဲ့ခွဲနေတဲ့ သားသမီးတွေက အတူနေသူတွေထက် ပိုအောင်မြင်ပါတယ်
24 Mar 2017 . 5:32 PM
တချို့တွေကတော့ ပညာစုံနေပေမယ့်လည်း မိဘနဲ့အတူ လက်ငုတ်လက်ရင်းကိုပဲ လုပ်ကိုင်ရင်း ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေမှာ အခြေကျတတ်ပါတယ်။ စွန့်စားလိုစိတ်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေက ပညာစုံပြီဆိုတာနဲ့ ဇာတိမြေကို ခွဲခွာပြီး ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ပြောင်းရွှေ့နေတတ်ကြတယ်။ “ပျော်ရာမှာ မနေ တော်ရာမှာ နေ” တဲ့သဘောပါ။ “ဘွဲ့ရတာနဲ့ မိဘနဲ့ခွဲနေသင့်ပြီလား”လို့ မေးလာရင် Akhayar အနေနဲ့ကတော့ “နေသင့်ပါတယ်” လို့ဖြေရမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့နေသင့်တာလဲ ကြည့်ရအောင်။
ကိုယ့်နယ်ကိုယ့်ရွာမှာဆိုရင် ရေတွင်းထဲက ဖားလိုပဲ နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ အကျယ်ဆုံးလို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ လူ့လောက အပြင်ကိုရောက်လာမှ အသိအမြင်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေဟာ ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာ၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ရပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာတတ်ပါတယ်။
၂။ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ကြုံနိုင်တယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်အသစ်မှာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဘဝတိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကောင်းအတူဆိုးအတူ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်မယ်ဆိုရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို မူကြိုဘဝကနေ ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ပညာသင်ပေးရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း မြင့်မားပါပေတယ်။ ပညာစုံလာတာနဲ့ မိဘတွေကို တဖန်လုပ်ကျွေးရမယ့် တာဝန်ကလည်း ရှိလာပါတယ်။ ဘဝတိုးတက်ဖို့ တစ်နယ်တစ်ကျေးမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးစိတ်ဖြစ်စေတယ်။
မိဘအိမ်တုန်းကဆို အဝတ်လည်း လျှော်စရာမလိုသလို ထမင်းလည်း ချက်စရာမလိုဘူးလေ။ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ပြီဆိုတော့ ကိုယ့်အဝတ်ကို ကိုယ်တိုင်လျှော်၊ ကိုယ့်ထမင်းကို ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီး ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကြရပါတယ်။ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကြုံလာတိုင်း အမေ့ရင်ခွင်ကို ခေါင်းဝှေ့ငိုကြွေးခဲ့ပေမယ့် လူ့လောကထဲမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြိုးစားအားထုတ်ကြရပါတယ်။
မိဘရင်ခွင်မှာနေတုန်းက နွဲ့ဆိုးဆိုးခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ရတဲ့အခါ လူကြီးတစ်ယောက်လို ရင်ဆိုင်လာကြရတယ်။ ပြဿနာပေါင်းစုံကို တစ်ယောက်တည်းဖြေရှင်းတတ်လာကြတယ်။ လမ်းမှန်ပေါ်မှာ တရွေ့ရွေ့လျှောက်ရင်း အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီကို လျှောက်ကြစို့လားဗျာ။
by Lwin Moe Htike .3weeks ago
by Moethae Say .4weeks ago
by Moethae Say . 11 months ago
by Editor . 12 months ago